Vaovao - Moa ve ny toro-hevitra momba ny Pipette voasivana tena misoroka ny fanaovana tsinontsinona sy ny aerosol?
Moa ve ny toro-hevitra pipette voasivana dia tena misoroka ny fandotoana ny kontinenta sy ny aerosol?
Ao amin'ny laboratoara dia misy fanapahan-kevitra hentitra raisina hamaritana ny fomba tsara indrindra hanaovana andrana fitsapana sy fitsapana. Rehefa mandeha ny fotoana dia nifanaraka tamin'ny laboratoara erak'izao tontolo izao ny toro-hevitra pipette ary manome fitaovana hahafahan'ny teknisiana sy ny mpahay siansa manao fikarohana lehibe. Marina indrindra izany satria ny COVID-19 dia manohy miely manerana an'i Etazonia. Ireo epidemiolojista sy virologista dia miasa mandritra ny ora maro mba hamorona fitsaboana ny otrikaretina. Ny toro-hevitra pipette voasivana vita amin'ny plastika dia ampiasaina handinihana ny virus ary ny paipaika fitaratra lehibe ankehitriny dia malama sy mandeha ho azy. Torohevitra plastika 10 vita amin'ny plastika no ampiasaina hanatanterahana fitsapana COVID-19 tokana amin'izao fotoana izao ary ny ankamaroan'ny toro-hevitra izay ampiasaina ankehitriny dia manana sivana ao amin'izy ireo izay heverina fa hanakana ny 100% ny aerosol ary hisorohana ny fandotoana ny hazo fijaliana rehefa atao sampling. Fa ohatrinona tokoa ireo torohevitra lafo vidy sy lafo vidy tontolo iainana ireo izay tena mahasoa ny laboratoara eraky ny firenena? Tokony hanapa-kevitra ny hamoaka ny sivana ve ny laboratoara?
Miankina amin'ny fanandramana na fanandramana eo an-tanana, ny laboratoara sy ivon-toeram-pikarohana dia hisafidy ny hampiasa toro-hevitra pipette tsy voasivana na voasivana. Ny ankamaroan'ny laboratoara dia mampiasa torohevitra voasivana satria mino izy ireo fa ny sivana dia hisoroka ny aerosol rehetra tsy handoto ny santionany. Ireo sivana dia matetika no jerena ho fomba mahomby amin'ny famonoana tanteraka ireo soritry ny loto amin'ny santionany, saingy indrisy tsy izany no izy. Ny sivana tendrony pipetan'ny polyethylene dia tsy misoroka ny fandotoana, fa kosa mampihena ny fihanaky ny loto fotsiny.
Hoy ny lahatsoratra iray Biotix vao haingana: “[ny teny hoe] arofenitra dia tsy fanonona diso momba ny sasany amin'ireo torohevitra ireo. Torohevitra avo lenta ihany no manome sakana tena famehezana. Ny ankamaroan'ny sivana dia mampihena fotsiny ilay ranoka tsy hiditra amin'ny barika pipette. ” Ny fandinihana tsy miankina dia vita tamin'ny fijerena ireo solony hafa amin'ny sivana tendron-tany sy ny fahombiazany raha ampitahaina amin'ny toro-hevitra tsy sivana. Lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny Journal of Applied Microbiology, London (1999) dia nandinika ny fahombiazan'ny toro-hevitra sivana polyethylene rehefa natsofoka tao amin'ny faran'ny fisokafan'ny pipette tip cone raha oharina amin'ireo torohevitra tsy voasivana. Tamin'ny andrana 2620, 20% ny santionany nampiseho fahalotoana entina tamin'ny orona pipettor rehefa tsy nasiana sivana, ary 14% ny santionany no voaloto rehefa nampiasa ny tendron'ny sivana polyethylene (PE) (sary 2). Hitan'ny fandinihana ihany koa fa rehefa nisy fantsom-panafody radioaktifa na plasmid ADN no napetaka tsy nasiana sivana, dia niseho tao anatin'ny pipettings 100 ny fandotoana ny barika pipettor. Mampiseho izany fa na dia mampihena ny habetsaky ny fahalotoana amin'ny hazo hafa aza ny tendrony voasivana avy amin'ny tendrony pipette iray mankany amin'ny iray hafa, ireo sivana dia tsy mijanona tanteraka amin'ny fandotoana.